Tiro yar oo dambiilayaal ah ayaa dembiyada ugu badan gala - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
En inbrottstjuv bryter upp dörren till en bostad med hjälp av en kofot Foto: Henrik Montgomery / SCANPIX
Tiro yar oo dambiilayaal ah ayaa dembiyada ugu badan gala
La daabacay fredag 7 november 2014 kl 10.07
Koox yar oo dambiilayaal ayaa waxay geystaan dambiyada inta ugu badan, kooxda ayaa laga helayaa degmooyinka waaweyn iyo degmooyinka yar yar labadaba. Sidaa waxaa daaha ka faydaysa warbixin cusub oo ay soo saareen guddida ka hortaga dembiyada
Eva Rolhsson ayaa xabsiga ku jirtay muddo 15 sanno ah oo nolosheeda ka mid ah, usbuucyo ka hor ayay dalbatay in xukunka laga khafiifiyo. Inkastoo hadda aanu mukhaadaraad ku jirin jidhkeeda balse waxay ka sheekaynaysaa sidii ay lacag ku heli jirtay iyada oo ka ganacsanaysa mukhaadaraadka.
-Waxaan arkaa ibaha dembiyo kala duwan, markaa aan maraayo magaalada ee aan arko gaadhi uu dhex yaalo koombiyuutar iyo wixii la mid ah. Waagii hore gaadhiga waxaan ku sugi jiray tusaale ahaan meelaha caruurta lagu xanaaneeyo, subixii marka ay islaamuhu caruurta kenaan waxay shandada kaga tegi jireen gaadhiga dhexdiisa, inta aan daaqada jabiyo uun baan qaadan jiray shandada, sidaas ayay sheegaysa Eva Rolhsson
Hadda waxyabaha noocas ah waar arkaa mar kasta. Lakiin hadda waxyaabaha ma sameeyo, waayo uma baahni lacag aan ku iibsado mukhaadaraad, ayay leedahay iyada oo hadalkeeda si wadata.
Sawirka noloshii hore ee Eva Rolhsson ayaa ah mid tilmaamaya kuwa ay yihiin dadka gala dembiyada ugu badan Sweden gudaheeda.
Sida laga soo xiganayo warbixin cusub oo ka soo baxday xafiiska guddida ka hortaga dembiyada, koox yar oo dambiilayaal ah ayaa gasha dembiyada ugu badan, sidoo kalena kooxdan ayaa laga helayaa magaalooyinka waaweyn iyo kuwa yar yarba, waxa ay ka siman yihiina waa mukhaadaraadka.
Jonas Öberg oo ah baadhe ka hawlgala xafiiska guddida ka hortaga dembiyada
-Way fududahay in la tilmaamo dadka diiwaangashan ee arrimahani la xidhiidhaan. Waa dad mukhaadaraadka qabatimay oo badana ku dhaca faldambiyeedyo la xidhiidha tuuganimo iyo xatooyo gaadiid, waa dad aad u tira yar oo jooga waddanka oo dhan, ayuu leeyahay Jonas Öberg.